Sateembar – Blast Off to Kindergarten
Dugsiga Ha Laysu Diyaariyo
Xirfadaha Layliska Bishaan
Ilmahaaga sii fursad uu wakhti kula qaato caruurta kale iyo dadka ka waaweyn. Dugsiga barbaarina ilmahaaga waxa wakhtiga intiisa badan lala qaadanaya caruur kale iyo barayaal kala duwan waxaana laga filayaa in uu dadka kale si fiican uu ula dhaqmo.
Ilmahaaga u sheeg waxa ku saabsan waxyahalaha ay samayn karto marka ay dad kale kaashanayso oo aysan kaligeed saymayn karin.
Cayaarta cayaaraha waxa ay u baahantahay laba qof ama ka badan, sida qabashada ama tuurista banooninga.
Qoyskaaga oo idil ha isla wada shaqeyaan si ay u abuuraan farshahan ama qorshaha farsamada. Si fiican meel muuqata ha lagu dhejiyo. Qaraabadaada ama deriskaaga fikraddan gaarsii. Isku day in qorshe adeegyadaee ku fidsan xaafadda oo idil iyo in la sameeyo wax sumcad fiican ku reebaya jaaliyaddaada.
Qorsheyso cunto uu qoyska oo idil wada cuno oo u bahaan in qofkasta uu qofka kale la shaqeeyo. Doroo waxa la karinayo. Doroo qofka wax jaraya, qofka karinaya, qofka walaaqaya. Kaddibna, cuntada wada cuna.
Ilmahaaga kala hadal waxkasta oo ku saabsan in guriga lagu sameynayo in si quman loo sameeyo. Waxa aad diyaarisa tusmo “shaqoyinka guiga” si loo xogeyo shaqoyinka iyo qofka masuulka ka ah shaqa kasta.
Akhris Ha Laysu Diyaariyo
Si loo kordhiyo eraybixinta ilmahaaga, ama tirade erayada kala duwan ay ayada isticmaasho, bar ereyo cusub adiga ku tafaasiil dheeraad ah ku dara waxa ay tiraahdo marka ay adiga kula hadlayso. Sahnka la qaaqo ayaa muujiyay in caruurta haysata ereybixin ballaaran ay akhriska ku fiicanyihiin. Aqoon u lahaanshaha ereyo badan waxa ay caruurta ku caawinaysaa fahamka waxa ay akhrisanayaan.
Caafimaadka Ha Laga Qaado
Layliska Xirfadaha Bishaan
Caruurta waa in indhaha laga baro si loo hubsado in ay si fiican u arkayaan.